June 2009 – Everybody Read TChen
Posted on June 29, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီတီချမ်း11 Comments on positive inspiration
မငြိုငြင်စေချင်ဘူး . . .
အဝေးကနေပြုံးပြုံးပြခဲ့တယ် . . .
နေ၀င်တော့မယ်ချစ်သူ . . . . .
နင်ဖြစ်တယ်ချစ်သူ . . .
Posted on June 27, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အတွဲ ကဗျာများ2 Comments on ချစ်သူ
Bis (brother+sister) လို့ သူခေါ်
“မမ” ပုံ မာမာနဲ့
လာခဲ့ Swing စမ်း။
ဂီ နန်း ပု နော်
Remembrance for 27th June 2009
Posted on June 26, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, မွေးနေ့ဆုတောင်း ကဗျာများ2 Comments on ဇွန်လ ၂၇ ရက်
တီကလဲ စ ၃ လုံးစပ်စုစိန် ဆိုတော့ ၀င်ကြည့်တာပေါ့အေ
ဘယ်ရမလဲနော်အဲမှာ ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ အဒေါ်ကြီးတဲ့
ခေါင်းကလဲ ကတ္တရာလမ်းနဲ့ရိုက်မိတော့ ဦးနှောက်တွေက ပွင့်ပြီးတော့
ကတ္တရာလမ်းမပေါ်မှာ စန့်စန့်ကြီးလဲနေတာလဲ သူပဲ
အင်းဟုတ်တော့နေပြီပေါ့နော် ငါတော့ ချက်ချင်းတွေ့နေရပြီပေါ့
ဒါပေမယ့် တီအဲဒီအမေကြီးကိုစိုက်ကြည့်မိတဲ့အခိုက်လေးမှာ ပဲ
တီသိလိုက်တယ် သူခု သွားစရာနေရာမရှိဘူးဆိုတာကို
နေရာမရှိလဲ သားနဲ့သာလိုက်ခဲ့တော့ အမေဆိုပြီးခေါ်ထားလာလိုက်တာ
တီက သူ့နာမည်လဲမသိတော့ ကိုယ်ဘာသာခေါ်ရပြုရလွယ်အောင် ဒေါ်နွေးလို့ ပေးထားတယ်
သူတို့က တခါတခါ ရှာစားရတာမလွယ်ဘူးတဲ့
အဲ့ဒီနေ့ ကတည်းက တီလဲဘာစားစား နဲနဲလေးချန်ထားတတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်လာတယ်လေ
သမီးတို့ မြင်ဖူးချင်ရင် လွှတ်လိုက်မယ်လေ
သူက ဆုံးတဲ့အချိန်တုံးက အွန်သည်စပေါ့ ဖြစ်တာရယ်
ဦးဆက်ပွင့် သွားတာရယ်ကြောင့် မြင်နေမကျရင်တော့ နည်းနည်းကြောက်စရာလိုလိုဖြစ်နေတာပေါ့
ဒါပေမယ့် အမေနွေးက သဘောကောင်းပါတယ်
သူကအရမ်းချစ်လာရင် လူကို လက်သည်းလေးတွေနဲ့ ကုတ်ခြစ်ပြီး ကျီဆယ်တတ်သေးတယ်လေ
တခုတော့ရှိတယ်နော် ၃ လုံးတွေဘာတွေမတောင်းရဘူး သူအရမ်းစိတ်ဆိုးတယ် သူ့သားက အဲတာတွေလုပ်ပြီးထောင်ကျသွားတာတဲ့
ပြောစကားလဲနားမထောင်၊တော်တော်လဲဆိုးတယ်တဲ့ အဲတာကြောင့်သူက အဲတာတွေတောင်းတဲ့ကောင်တွေဆို လည်ပင်းညစ်ချင်တာတဲ့…………..
တီကတော့ သူနဲ့နေလာတာကြာပြီဆိုတော့ မရှိရင်တောင်မနေတတ်သလိုဖြစ်နေပြီ
တခါတခါတော့ သူက ရုတ်တရက်ကြီးတွေ ကိုယ်ယောင်ပြတတ်သေးတယ်
တီ အိမ်သာထဲလှမ်းအ၀င်မှာ ကမုတ်မှာထိုင်နေတာမျိုး
နောက်ကျတော့လဲ ကျင့်သားရသွားတော့ အိုကေပါတယ်
Posted on June 24, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ပုံပြောမယ်5 Comments on ဒေါ်နွေး-ခ-အမေနွေး
It isasong of The Beatles, re-sing by Jim Sturgess and Joe Anderson in the movie call,
“Across the Universe”. Enjoy. The original English lyrics is down below.
ငါသေချာ သိတာ ကိုမင်းသိပါတယ်
ငါ “အင်း” လို့ပြောတယ်လို့
အကုန်က “ဟင့်အင်း” ဖြစ်နေတာ
Strawberry Fields- Jim Sturgess, Joe Anderson
I think I know I meana“Yes,” but it’s all wrong.
Posted on June 22, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, သီချင်း ခံစားမှုများ2 Comments on စထရော်ဘယ်ရီခင်းတွေ….
ရှာဖွေနေတုန်း . . .
အိပ်မက်လား . . .
ဘ၀လား . . .
သီချင်းတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့အတူ . . .
အလှ နဲ့ ရမက်
Posted on June 20, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, အတွဲ ကဗျာများ4 Comments on အလင်းမဲ့ မနက်ဖြန်
ရှမ်းခေါက်ဆွဲ (သို့) ချမ်း’s ခေါက်ဆွဲ
စားခါနီးမှ ပန်းကန်ထဲကို ခေါက်ဆွဲဖတ်လေးထည့်၊အသားကြိုက်သလောက်ထည့်၊ နံနံပင်နဲ့ သံပရာထည့်၊ နံရိုးဟင်းရည်ပူပူလေးခပ်ထည့်လိုက်ရင်တော့ အခုအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းစားချင်စဖွယ် လှလှပပ ပြင်ဆင်ထားပြီးအရသာရှိလှတဲ့ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ (သို့) ချမ်း’s ခေါက်ဆွဲ တပွဲကိုရပါပြီ
Posted on June 18, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ခေါက်ဆွဲ8 Comments on ရှမ်းခေါက်ဆွဲ (သို့) ချမ်း’s ခေါက်ဆွဲ
Posted on June 16, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်းပြောတဲ့ အချစ် ဒဿနများ4 Comments on ရွေးချယ်မှု (ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းတွေ)
Posted on June 15, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်းပြောတဲ့ အချစ် ဒဿနများ5 Comments on ကာရံမဲ့ကဗျာ (ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းတွေ)
Posted on June 14, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်းပြောတဲ့ အချစ် ဒဿနများ8 Comments on စက်ရုပ် (ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းတွေ)